प्रचण्डले आफु ओर्जिनल माओवादी हैन भनेपछि बाबुराम भट्टराईले दिए यस्तो दनक — Sanchar Kendra
प्रचण्डले आफु ओर्जिनल माओवादी हैन भनेपछि बाबुराम भट्टराईले दिए यस्तो दनक
काठमाडौं । एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका सेकेण्ड अध्यक्ष प्रचण्डले आफु ओर्जिनल माओवादी नभएको भाषण दिएपछि समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै कडा व्यंग्य गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्- ‘मेरा परम मित्र प्रचण्डलाई केही प्रश्न: तपाईं ओरिजनल माओवादी नभए के तपाईँ डुप्लीकेट माओवादी हो ? यो तालले त कुनै दिन तपाईले आफुलाई ओरिजनल कम्युनिष्ट पनि थिइनँ भन्नुपर्ला ! किनकि पुष्पलालको हातबाट पार्टी सदस्यता लिएकाले त्यसो भन्ने हो भने पुष्पलाल स्वयं शुरूमा काँग्रेस हुनुहुन्थ्यो ।’
उनले प्रचण्डको ओरिजिनल र डुप्लिकेट अवतार कसरी चिन्ने ? भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । उनले लेखेका छन्- ‘पुष्पलाल ओरिजनल नभए पछि उनका राजनीतिक सन्तान पनि हुने कुरा भएन!आखिर तपाईंको ओरिजनल र डुप्लीकेट अवतार कसरी चिन्ने ? अनि आफुलाई चौमको मदन भण्डारी पनि भन्न भ्याउनुभएछ ! पछि मदन र म सानैमा छुट्टिएका एउटै आमाका सन्तान पनि भन्ने हो कि ? यसरी माछा देखे भित्र हात सर्प भए बाहिर हात कहिलेसम्म ?’
आज भन्दा २५ बर्ष पहिला २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु भएको जनयुद्ध र तत्कालिन नेकपा माओवादी महासचिव समेत रहेका प्रचण्डले शुक्रबार विराटनगरको एक कार्यक्रममा आफू ओरिजिनल माओवादी नभएको अभिव्यक्ति दिएपपछि त्यतिबेलाका उनका घनिष्ट सहयोगी तथा माओवादी दोश्रो वरियतामा रहेका नेता भट्टराईले यताओ ट्वीट गरेका हुन्।
डा. भट्टराईले प्रचण्डलाई कडा कटाक्ष गर्दै मदन र म सानैमा छुट्टएिका एउटै आमाका सन्तान पनि भन्ने हो कि ? भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् । प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिपछि शुक्रबारदेखि नेपाली राजनीतिमा यहि बिषयले चर्चा पाएको छ । प्रचण्डका युद्धकालिन सहयात्री बाबुरामका साथै अन्य नेता कार्यकर्ताले पनि प्रचण्डको खिल्ली उडाउन थालेका छन् ।